प्रकाश सुवेदीले कसको निर्देशनमा टिभीबाट शिल्पा पोखरेलको चरित्र ह त्या गरे? करिश्मा मानन्धरले खोलिन् रहस्य, यस्तो रहेछ बास्तविकता (भिडियो हेर्नुहोस्) – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत्र २९, २०७७ समय: १०:४४:४५
नायिका शिल्पा पोखरेल भोजपुरी नायकसँग लागेको भन्दै कार्यक्रम बनाएका आफूलाई चलचित्र पत्रकार बताउने प्रकाश सुवेदीले उक्त काम कसको निर्देशनमा गरेका थिए भन्ने प्रश्न अहिले चौतर्फी रुपमा उठेको छ । आफूलाई मन नपरेका र आफूले भनेको नमान्ने कलाकारलाई नराम्रा शब्द प्रयोग गरेर उनी टिभी कार्यक्रम बनाउने गर्छन् ।
यसै सन्दर्भमा पछिल्लो पटक उनले शिल्पा पोखरेलको बारेमा यस्तै एक कार्यक्रम बनाएका थिए । केही समय अघि नायीका शिल्पा पोखरेलले उनका श्रीमान छवि ओझाका विषयमा दिएको अभिब्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भएको थियो। धेरैले उनको जस्तै क्यारीकेचर गरेर टिकटक भिडियो बनाए । शिल्पा छविको चौथो श्रीमती हुन् । उनीहरुबीच ४ वटा मु द्दा चलिरहेका छन् । अधिवक्ता स्वागत नेपालले सो विषय हेरिरहेका छन् । सो मु द्दा को वकालत स्वागत नेपालले गरेका छन् ।
शिल्पा पोखरेलका बिषयमा नायिका करिश्मा मानन्धरले मुख खोलेकी छिन् । उनी भन्छिन्, ‘कोहि मनिस सर्वगुणसम्पन्न छैन, सबैमा केही न केही कमजोरी हुन्छ । हरेक व्यक्ति आफ्नो जिवनमा आएको समस्यासंग आफै जुधिरहेको हुन्छ । ती समस्या उसले चाहेर मात्रै भयेको हुदैन । कलाकार भएको नाताले अन्य क्षेत्रको भन्दा कलाकारको निजि जिवनको बारेमा बढी नै टीका टिप्पणी हुन्छ ,केही हद सम्म सहनु पनि पर्छ ।तर हदैसम्मको स्तर बिहिन तरिकाले येस्तो बिवाद बनाएको देख्दा अनौठो लागेको छ । सम्मान दिउ सम्मान लिउ । बेलाबेलामा विशेष गरि महिला कलाकार माथी हुने यो व्यबहारले मन खिन्न हुन्छ । के सबै हाम्रा छोरी चेली होइनन्? भोलिको दिनमा यो हामिमाथी पनि पर्न सक्ने कुरामा दुई मत छैन । कसैसँग तपाईंको निजि रिस र समस्या छ भने पुलिस प्रशासन जानुस , अदालत जानुस , कानुनको साहारा लिनुस या निजिरुपमा भेटेर समस्या को समाधान गर्नुस । तर आफ्नो पेसाको नैतिकता कायम राख्नुस ।’